Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 21
Misy antony marim-pototra amin'ilay fitakiana, saingy ny fanambarana amin'ny ankapobeny dia tsy marina. Ny fanahin'ny olona dia tsy miverina ho vorona na biby raha tsy ampiharina amin'olombelona ireo teny ireo. Taorian'ny nahafatesan'ny olona iray dia ny fitsipiky ny maha-olombelona azy eto an-tany dia miverina any amin'ireo fanjakana na tany noforonin'izy ireo izay nahasarika ny fananganana ny vatan'olombelona mety maty. Betsaka ny marim-pototra ilazana ny fanambarana fa afaka averina ao amin'ny vatan'ny biby ny fanahy. Ny fototry ny fanambarana toy izany dia ny finoanoam-poana sy ny fomba amam-panao; fa ny fomban-drazana dia matetika mitahiry fahamarinana lalina amin'ny endrika ara-bakiteny tsy misy dikany. Ny finoanoam-poana dia endrika izay fototry ny fahalalana taloha. Ny olona mitana ny finoanoam-poana nefa tsy mahalala ny dikan'izany dia mino ny endrika, fa tsy manana ny fahalalana. Ireo izay amin'izao andro ankehitriny izao dia mino ny lovantsofina fa ny fanahin'olombelona dia lasa biby indray, mifikitra amin'ny finoanoam-poana na ny fomban-drazana satria namoy ny fahalalana izay miafina ny fanambarana ivelany sy ara-bakiteny. Ny tanjon'ny fahatongavana sy ny fananganana indray ny saina ho vatana dia ny hahafantarany izay ampianaran'ny fiainana an'izao tontolo izao. Ny fitaovana izay ianarany dia ny maha-olombelona ny biby. Rehefa avy nandia endrika iray tamin'ny fahafatesana izy ary saika hamorona indray dia manangana ho azy izy ary miditra endrika olombelona hafa. Saingy tsy miditra amin'ny karazana karazam-biby akory. Tsy miditra amin'ny vatan'ny biby izany. Ny antony dia satria ny endrika henjana biby dia tsy hanolotra fotoana hanohizana ny fianarany. Ny vatan'ny biby dia mety hihemotra ny saina. Ny hadisoana eo amin'ny fiainana iray dia tsy ho voarindra ao an-tsaina amin'ny vatan'ny biby raha toa ka mety ho ao anaty vatan'ny biby ny saina, satria ny zavamananaina sy ny atidoha dia tsy nahaliana ny fihetsikin'ny sain'ny tsirairay. Ny rindran'olombelona amin'ny fampandrosoana ny atidoha dia ilaina amin'ny saina ny mifandray amin'ny vatan'olombelona biby; ny atidohan-biby dia tsy fitaovana ilaina amin'ny sain'olombelona hiasa. Raha toa ka mety ho lasa saina indray ny saina, dia tsy mahatsiaro tena ho toy ny saina ao amin'ny vatan'ny biby ny saina. Ny fahatongavan-tsaina toy izany ao amin'ny vatan'ny biby dia tsy misy dikany, satria tsy misy fahadisoana azo namboarina sy nanavotana. Mety hahitsy ny lesoka, fanitsiana diso ary lesona ianarana sy fahalalana azo raha toa ka ao anaty vatan'olombelona ny saina ary afaka mifandraika amin'ny atidoha izay hamaly azy. Tsy mitombina ny fiheverana fa ny zavatra rehetra azo tanterahana amin'ny lalàna izay ny saina izay mihetsika amin'ny alàlan'ny olona dia tokony ho lasa karazana biby.
Voalaza ao ny tonian-dahatsoratra momba ny eritreritra, ny teny, vol. 2, No. 3 Desambra, 1905, fa: “Mihevitra ny olombelona ary mamaly ny natiora amin'ny alàlan'ny fanohizana tsy an-kijanona ny eritreriny raha mijery izy sady manaja ny tsy antony. . . .Ny eritreritra sy manapotika ny natiora araka ny fisainany, ary ny natiora dia mamoaka ny maha-izy azy amin'ny endriny rehetra amin'ny maha-organika azy fa zanaky ny heviny. Ny hazo, ny voninkazo, ny biby, ny biby mandady, ny vorona, dia amin'ny endriny ny fiakarana ny eritreriny, raha ny toetrany samy hafa dia sary sy fampahafantarana manokana ny faniriany manokana. Ny zavaboary dia mamerina arakaraka ny karazany iray, fa ny fisainan'ny olona no mamaritra ny karazana ary ny fiovan'ny karazana ihany no miova amin'ny heviny fotsiny. . . .Ny sampandraharaha miaina ny fiainana ao amin'ny vatan'ny biby dia tsy maintsy manana ny toetrany sy ny endriny voafaritry ny fisainan'ny olona mandra-pisaina azy ireo. Amin'izay dia tsy mila ny fanampiany intsony izy ireo fa hanangana ny endriny manokana toa ny fanasan'ny olombelona ankehitriny ny fananganana azy sy ny azy. ” Azonao atao ve ny manazava bebe kokoa ny fomba fihevitry ny olona samy hafa momba ny tontolo ara-batana mba hamokarana karazana biby samy hafa toy ny liona, bera, ny vorombola, ny rattlesnake?
Mba hamaliana an'ity fanontaniana ity dia ilaina ny manoratra lahatsoratra toy ny edisiona The Word. Tsy azo atao amin'ny sehatra natokana ho an'ny Moments with Friends, ary tokony avela any amin'ny departemanta fanontana ity gazety ity. Na izany aza, dia hiezaka isika hamelabelatra ny foto-kevitra izay hanatanterahana izay voalaza ao amin'ny teny voalaza etsy ambony.
Amin'ny zava-manan'aina rehetra dia ny olombelona ihany no manana ny fahaiza-mamorona (izay miavaka amin'ny fananahana.) Ny fahaiza-mamorona dia ny herin'ny fisainany sy ny sitrapony. Ny eritreritra dia vokatry ny asan'ny saina sy ny faniriana. Rehefa miasa amin'ny faniriana ny saina dia mipoitra ny eritreritra ary maka ny endriny eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny eritreritra. Ity zava-manan'aina ity dia eo amin'ny fiaramanidina super-physique. Ny eritreritra izay miendrika dia misy ao amin'ny fanjakana super-fizika eo amin'ny sehatry ny fisainana. Ny faniriana amin'ny maha-fitsipika kosmika ataon'ny sain'ny olona dia miteraka eritreritra araka ny toetran'ny saina sy ny faniriana. Ireo eritreritra ireo rehefa novokarina dia ireo karazana endrika miseho eto amin'izao tontolo izao, ary ireo karazana endrika ireo dia ahetsiketsika avy amin'ny sampana na dingana sasany amin'ny fiainana izay tsy afaka mamorona endrika ho an'ny tenany.
Ny olombelona dia manana ny toetran'ny biby rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ny karazana biby na karazana tsirairay dia maneho ny faniriana manokana ary tokony ho hita ao amin'ny olombelona. Na dia eo amin'ny olombelona aza ny toetran'ny biby rehetra dia izy, izany hoe ny toetrany, olombelona, ​​ary ny biby ao aminy dia tsy hita afa-tsy amin'ny alàlan'ny mamela ny filana sy ny faniriana hananana ary haneho ny maha-izy azy amin'ny alalany. Toy ny tsipika maro be mifangaro sy nopotipotika tao anaty vatany ny zavaboary rehetra ary izy no biby miompy amin'ny famoronana biby rehetra. Zahao ny tavan'ny lehilahy rehefa tratry ny fitiavan-tevana izy, ary hita taratra ao aminy ny toetran'ny biby miorina amin'izany. Mitsinjo ny tavany ilay amboadia ary azo jerena amin'ny fanaony. Ny pataloha tigra no mandalo azy toy ny hoe handora maika ny rembiny izy. Misolelaka ilay bibilava amin'ny alàlan'ny lahateniny sy miboridana amin'ny masony. Nierona ny liona raha miasa amin'ny vatany ny fahatezerana na ny faniriana. Ny iray amin'ireo dia manome toerana ny iray hafa rehefa mandalo ny vatany, ary miova ny fitenin'ny tarehiny na dia misy karazany aza. Rehefa rehefa mieritreritra ny toetran'ny tigra na amboadia na amboahaolo ny olona dia mamorona ny eritreritra momba ny tigra, amboadia, na amboahaolo, ary miaina ao anatin'ny fiainana ny eritreritra mandra-pitariky ireo tontolo ara-tsaina ambany ka hanome endrika azy ireo. ireo sampandraharaha tonga amin'ny alàlan'ny fananahana. Ireo karazana biby isan-karazany ireo dia mandalo ny endrika ary omena fanehoana eo amin'ny tavan'ny olona raha mihetsika ao ambadiky ny efijery ny sary. Tsy afaka ny amboadia anefa ny amboadia na ny amboahaolo toy ny tigra na ny iray amin'ireny dia bibilava. Ny biby tsirairay dia mihetsika araka ny karazany avy ary tsy manao tahaka ny biby hafa noho ny tenany. Izany dia satria, araka ny voalaza ao amin'ny teny nindramina, ary arak'izay ho haseho taty aoriana, ny biby tsirairay dia manam-pahaizana manokana, karazana faniriana manokana ao amin'ny olombelona. Ny eritreritra no namorona ny endriny rehetra eto ambonin'ny tany, ary ny olombelona no hany biby mieritreritra. Izy dia mijoro mifandray amin'ny tontolo ara-batana amin'ny maha-Andriamanitra, ilay Mpamorona, no voalaza fa mifandraika amin'ny olona. Saingy misy fomba iray hafa mahatonga ny fisehoan'ny biby eo amin'ny tontolo ara-batana. Izany koa dia hanazava ny iray amin'ireo dikan'ny dikany maro be sy ny antony anaovana ny fanambarana ao amin'ny soratra masina taloha fa ny olona dia mety hamorona indray na mamindra ao anaty vatan'ny biby. Izany no izy: Mandritra ny fiainana dia fitsipiky ny biby ny faniriana olona, ​​izay tsy misy endrika voafaritra. Nandritra ny androm-piainan'ny olona dia miova ny faniriana ao aminy ary tsy misy karazana biby voafaritra ela izay ao aminy. Ny amboadia dia arahin'ilay amboadia, ny amboadia amin'ny bera, ny orsa amin'ny osy, ny osilahy amin'ny ondry ary ny sisa, na amin'ny filaharana rehetra, ary izany dia mitohy matetika amin'ny fiainana raha tsy hoe misy fironana miharihary eo amin'ny lehilahy iray ny iray amin'ireo biby maro manjaka amin'ny hafa amin'ny toetrany ary izy dia ondry na amboahaolo na amboadia na mitondra ny androm-piainany. Nefa na izany na tsy izany dia amin'ny fahafatesana, ny faniriana miova amin'ny toetrany dia mitoetra ao anaty karazam-biby voafaritra iray izay mety mbola hanana endrika endrika astraly olombelona. Taorian'ny nandaozan'ny saina ny bibiny, ny biby dia miala tsikelikely ny faritry ny fifehezana ny zanak'olombelona ary maka ilay karazana biby tena izy. Biby io biby io amin'izay tsy misy vestige ny maha-olombelona.